Anyị na-akpọ Leagoo S8 | Gam akporosis
Ọ bụrụ na nkeji ole na ole gara aga, anyị kwupụtara mwepụta nke LEAGOO S8 ọhụrụ na LEAGOO S8 Pro, ugbu a, anyị ewetara gị otu asọmpi na-atọ anyị ụtọ maka obodo gam akporo Androidsis niile; na ọ bụ ya anyị ga-enye ihe ọbụla dịka LEAGOO S8 ọhụụ nye otu n'ime ndị na-agụ akwụkwọ anyị. Nakwa ihe inye ego a bụ mba ụwa ya mere o nwere ike ibu nke gi n’agbanyeghi obodo gi bi.
You chọrọ ịbụ onye nwere ihu ọma mmeri nke LEAGOO S8 kpamkpam n'efu? Mgbe ahụ, gụọ isiokwu a ma chọpụta otu Nwere ike ịbụ nke gị.
1 Etu esi emeri LEAGOO S8?
2 LEAGOO S8 ọrụaka oru
Etu esi emeri LEAGOO S8?
Ikere òkè dị mfe, naanị ị ga - agbaso usoro ndị egosiri na ọmarịcha ọkụ na - esote. N'ezie, ọ dị ezigbo mkpa iji gosipụta na ị mezuru ihe niile achọrọ ebe ọ bụ na asọmpi gara aga anyị nwere ụfọdụ ndị mmeri ndị na-ezuteghị otu n'ime ha (ịbụ onye ofufe na Facebook, ịdenye aha na Telegram anyị, ...) na n’ikpeazu ha edebewo ihe nrite nke diri onye mmeri ozo.
Oge a usoro ị ga - eso bụ:
Debanye aha gaa na ọwa Youtube anyị
Bụrụ onye ofufe nke anyi na facebook
Bụrụ onye otu site na ọwa anyị na Telegram
Mgbe ahụ enwere nhọrọ ọzọ ga - enyere gị aka inweta isi ihe ọ bụrụ na ị kpọọ ndị enyi gị isonye na zoo. Maka enyi ọ bụla ị nwetara, ị ga-enweta isi okwu maka eserese ahụ.
Ma nke ahụ bụ ya. Gịnị dị mfe? Mee ngwa ngwa ebe ọ bụ naanị na ị nwere Mọnde na-esote, Ọktọba 23, 2017 isonye.
Ugbu a iji gbaa gị ume isonye, ​​anyị na-enye gị vidiyo ebe ị nwere ike ịhụ LEAGOO S8 yana tebụl teknụzụ zuru ezu.
LEAGOO S8 ọrụaka oru
Nkọ 5,72-anụ ọhịa ngosi na akụkụ ruru 18: 9 na mkpebi 1440 x 1080p
6750Ghz MediaTek MT1.5T nhazi
Ntọala nchekwa 32 GB
SONY 13.0MP + 2.0MP igwefoto abuo
8.0MP + 2.0MP igwefoto n'ihu
LG 2.940 mAh batrị nwere 5V2A ngwa ncha usoro
Ọnụ ego: 169,99 $
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Ntugharị » Anyị na-akpọ a Leagoo S8
Na-ekere òkè !!. Daalụ maka inyepụ !! !!
Zaghachi Laly Diaz Pajares
Daalụ, m na-ekere òkè ma na-eso!
Zaghachi Alberto Bayón Fernández
Soro ma m keere ma kelee gị
Zaghachi Maury Huanquinahuel
Ndị a na-enweghị njedebe na-enweghị atụ, m nọ n'azụ Blackview S8 na n'oge ahụ dị ezigbo mma, ọ malitela ire ere ya maka € 127, maka ihe ọ na-enye, ọ bụ nke a na-apụghị imeri emeri.
Daalụ, m na-ekere
Zaghachi Elena Knyazhechenko
M isonye, ​​M hụrụ n'anya na mobile, ezi uru na a nnọọ oké ọnụ price.
M na-eso ndị enyi ekerịta?
aja na ebe ha biputara nsonaazụ. nke ihe osise daalụ ...
AKWKWỌ CAROLINA dijo
Na onye mmeri nke ihe osise ahụ?
anyị nwere onye mmeri:
Maria Isabel Sanchez Grande nke Salamanca